Maxay Itoobiya U Doonaysaa Dekedaha Dalalka Deriska Ah? Akhriso Warbixin Ay BBC Somali Diyaarisay | Berberatoday.com
Maxay Itoobiya U Doonaysaa Dekedaha Dalalka Deriska Ah? Akhriso Warbixin Ay BBC Somali Diyaarisay
Warbixin ay BBC Somali diyaarisay
Itoobiya waa dal aanan bad lahayn, waxayna taas dhacday sanadkii 1993-dii markii ay madaxbanaani ku dhawaaqday Eritrea oo markii hore ka mid ahayd dhulweynaha Itoobiya, waxaa kale oo intaas xigay in labad dal ay dagaalameen sidaasi darteedna dekeda Casab waxa ay noqotay meel aanay galaangal u lahayn dowladda Itoobiya.
Dowladda Soomaaliya ayaa inkasta oo aanay si toos ah uga hadlin saamiga Itoobiya, ayay gabi ahaanba ka hor timid heshiiska dekeda Berbera, iyada oo xitaa baarlamaanka uu meelmariyay xeer dalka looga mamnuucayo shirkadda DP World, islamarkaasna lagu laalayo heshiiska.
Hase yeeshee heshiiskaas weli ma uu saxeexin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaamaa uu buuq siyaasadeed baarlamaanka ka dhashay labo maalmood kadib markii xeerka si aqlabiyad ah loogu codeeyay.
Somaliland ayaa sheegtay in aanay waxbo ka khuseynin diidmada Soomaaliya islamarkaasna ay xaq u leeyihiin in ay ku manaafacaadaan kheyraadkooda iyo illaahooda dhaqaale.
Sidaasi oo ay tahay, haddane wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud iyo kii Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay Jabuuti ku kala saxeexdeen heshiis dhigaya in Somaliland ay u madaxbanaantahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Islamarkii la saxeexay heshiiska dekeda Berbera, waxaa dhacday in dowladda Jabuuti ay qandaraaskii dekeda Dooraale kala laabatay shirkadda DP Worl, iyada oo lagu eedeeyay in ay kasoo bixi weyday balanqaadyadii hore loogu heshiiyay.
Labada dal waxa ay kadib kala saxeexdeen heshiis dhigaya in Itoobiya ay saami ku lahaato dekeda Dooraale, halka Jabuutina ay saami ku yeelato shirkadda macaashka badan ee diyaaradaha ee Ethiopian Airlines.
Lama oga sida ay Itoobiya u wada maaraynayso xidhiidhka Jabuuti iyo kan DP World oo halkii laga eryay shirkadan ay iyadu gashay.
Dr Abiy waxa uu sidoo kale bishan safar ku tagay dalka Kenya, halkaas oo madaxda ugu sareysa ee Kenya uu la saxeexday heshiisyo kala duwan.
Sida uu qorey wargeyska Daily Nation, heshiiska waxaa ka mid ah heshiis horey labada dowladood ay u galeen oo lagu magacaabo LAPSET, kaas oo la’isku xidhayo dekada Lamu iyo dalka Itoobiya.
Inkasta oo aanay weli soo bixin in Itoobiya ay saami ka heshey dekeda Lamu, haddane mashruucan LAPSET waa mid aad u balaadhan oo la doonayo in lagu dhiso waddooyin laami ah, iyo qadka tareen oo isku xidha labada dal si badeecada Itoobiya uga soo degta Lamu ama uga dhoofta ay si sahlan ugu kala gooshto masaafarada fog ee u dhaxaysa labada meelood.
Itoobiya ayaa doonaysa in ay hoos u dhigto canshuurta tirada badan ee kaga baxda dhoofka iyo soo dajinta badeecooyinka kala duwan. Waxa kale oo ay doonaysaa in ay hesho damaanad ah meelo ay si joogto ah wax kala soo degi karto si aanay u saamaynin isbadala siyaasadaha.
Sarkaal kale oo hadlay waxa uu sheegay in Itoobiya ay qeyb ku lahaan doonto go’aamada ku saabsan jaangooyada canshuuraha dekeda Sudan.
Mid kale oo sababaha Itoobiya ka mid ah ayaa ah in ay doonayso in ay kala qafiifiso culeyska shixnadaha usoo dekada, loona kala qeybiyo dekeda kala duwan, sidoo kalena uu halkaas ka dhasho loolan dalalka ay ugu jiraan macaashka badan ee ku jira ganacsiga lala samaynayo Itoobiya.